Numeri 22 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
22 Zvino vanakomana vaIsraeri vakatama vakanodzika musasa pamapani erenje eMoabhi+ mhiri kwaJodhani pakatarisana neJeriko. 2 Bharaki+ mwanakomana waZipori akaona zvose zvakanga zvaitirwa vaAmori naIsraeri. 3 Moabhi akatya kwazvo vanhu vacho, nokuti vakanga vari vazhinji; uye Moabhi akatanga kutya kwazvo vanakomana vaIsraeri.+ 4 Moabhi akati kuvarume vakuru veMidhiyani:+ “Zvino ungano iyi ichananzva zvinhu zvedu zvose zvakatipoteredza sezvinoita nzombe inonanzva bumhudza resango.” Panguva iyoyo chaiyo Bharaki+ mwanakomana waZipori ndiye akanga ari mambo weMoabhi. 5 Zvino akatuma nhume kuna Bharami+ mwanakomana waBheori kuPetori,+ iri pedyo noRwizi+ rwenyika yevanakomana vorudzi rwake, kunomushevedza, achiti: “Tarira! Kune rudzi rwakabuda muIjipiti. Tarira! Vafukidza nyika kusvikira kunogona kuonwa nomunhu,+ uye vagere pamberi pangu chaipo. 6 Ndapota, chiuya zvino; nditukire+ vanhu ava, nokuti vane simba kundipfuura. Zvichida ndingakwanisa kuvakunda uye ndingavadzinga munyika ino; nokuti ndinonyatsoziva kuti munhu waunokomborera, akakomborerwa uye munhu waunotuka, akatukwa.”+ 7 Naizvozvo varume vakuru veMoabhi nevarume vakuru veMidhiyani vakaenda nemibhadharo yokushopera+ iri mumaoko avo, vakaenda kuna Bharami,+ vakamuudza mashoko aBharaki. 8 Iye akabva ati kwavari: “Rarai pano usiku huno, ndichakupindurai sezvandichaudzwa naJehovha.”+ Naizvozvo machinda eMoabhi akagara pamwe naBharami. 9 Zvino Mwari akauya kuna Bharami, akati:+ “Varume ava vauinavo ndivanaani?” 10 Naizvozvo Bharami akati kuna Mwari wechokwadi: “Bharaki+ mwanakomana waZipori, mambo weMoabhi, atuma shoko kwandiri, achiti, 11 ‘Tarira! Kune vanhu vari kubva kuIjipiti, vari kufukidza nyika kusvikira kunogona kuonwa nemaziso.+ Zvino uya, uvatuke nokuda kwangu.+ Zvimwe ndingakwanisa kuvarwisa ndikavadzinga.’” 12 Asi Mwari akati kuna Bharami: “Usaenda navo. Usatuka vanhu vacho,+ nokuti vakakomborerwa.”+ 13 Pashure paizvozvo Bharami akamuka mangwanani, akati kumachinda aBharaki: “Endai kunyika yenyu, nokuti Jehovha aramba kuti ndiende nemi.” 14 Naizvozvo machinda eMoabhi akaenda, akasvika kuna Bharaki, akati: “Bharami aramba kuuya nesu.”+ 15 Asi Bharaki akatumazve mamwe machinda mazhinji kwazvo, aikudzwa kupfuura okutanga. 16 Iwo akasvikawo kuna Bharami akati kwaari: “Zvanzi naBharaki, mwanakomana waZipori, ‘Ndapota, usadziviswa kuuya kwandiri. 17 Nokuti chokwadi ndichakukudza kwazvo,+ uye ndichaita zvinhu zvose zvaungandiudza.+ Naizvozvo ndapota, uya. Nditukire vanhu ava.’” 18 Asi Bharami akapindura akati kuvashandi vaBharaki: “Kunyange dai Bharaki aizondipa imba yake izere nesirivha nendarama, ndaisazodarika murayiro waJehovha Mwari wangu, kuti ndiite chinhu chiduku kana chikuru.+ 19 Ndapota, zvino imi rarai pano usiku huno kuti ndizive kuti Jehovha achandiudzeizve.”+ 20 Mwari akabva auya kuna Bharami usiku, akati kwaari: “Kana varume ava vauya kuzokushevedza, simuka uende navo. Asi shoko randichakuudza ndiro chete raungataura.”+ 21 Pashure paizvozvo Bharami akamuka mangwanani, akasungirira chigaro pambongoro yake hadzi akaenda nemachinda eMoabhi.+ 22 Zvino Mwari akatsamwa kwazvo nokuti iye akanga achienda; uye ngirozi yaJehovha yakamira mumugwagwa kuti imudzivise.+ Iye akanga akatasva mbongoro yake hadzi, uye aiva nevashandi vake vaviri. 23 Mbongoro yacho yakaona ngirozi yaJehovha yakamira mumugwagwa, bakatwa rayo rakanga rakavhomorwa riri muruoko rwayo;+ mbongoro yacho yakaedza kutsauka mumugwagwa kuti ipinde musango, asi Bharami akatanga kurova mbongoro yacho kuti aidzorere mumugwagwa. 24 Ngirozi yaJehovha yakaramba imire munzira yakamanikana yaiva pakati peminda yemizambiringa, yaiva norusvingo rwematombo kurutivi urwu norusvingo rwematombo kurutivi urwo. 25 Mbongoro yakaramba ichiona ngirozi yaJehovha, ikatanga kuzvimbandidzira kurusvingo, ikambandidzirawo tsoka yaBharami kurusvingo; uye iye akairovazve. 26 Ngirozi yaJehovha yakapfuurazve ikanomira pakanga pakamanikana, pakanga pasina pokutsaukira kurudyi kana kuti kuruboshwe. 27 Mbongoro yacho payakaona ngirozi yaJehovha yakabva yarara pasi, Bharami ari pamusoro payo; Bharami akatsamwa kwazvo,+ akaramba achirova mbongoro yacho nomudonzvo wake. 28 Jehovha akazoshamisa muromo wembongoro,+ iyo ikati kuna Bharami: “Chii chandakuitirai zvamandirova katatu aka?”+ 29 Zvino Bharami akati kumbongoro: “Nokuti wandiitira utsinye. Kudai ndanga ndiine bakatwa muruoko rwangu, ndingadai ndakuuraya!”+ 30 Mbongoro yacho hadzi ikabva yati kuna Bharami: “Handisi mbongoro yenyu hadzi yamakatasva kwoupenyu hwenyu hwose kusvikira nhasi here? Ndaimbokuitirai zvakadai here?”+ Iye achibva ati: “Aiwa!” 31 Zvino Jehovha akavhura maziso aBharami,+ zvokuti akaona ngirozi yaJehovha imire mumugwagwa, bakatwa rayo rakanga rakavhomorwa riri muruoko rwayo. Akabva akotama, akagwadama chiso chake chakatarira pasi. 32 Ngirozi yaJehovha yakabva yati kwaari: “Waroverei mbongoro yako hadzi katatu aka? Tarira! Ini—iyeni ndauya kuzokudzivisa, nokuti nzira yako inopesana chose nezvandinoda.+ 33 Mbongoro hadzi yandiona ikaedza kutsaukira kurutivi pamberi pangu katatu aka.+ Ko kudai yanga isina kutsauka pamberi pangu! Nokuti kusvikira zvino ndingadai ndakuuraya,+ asi iyo ndingadai ndaichengetedza iri mhenyu.” 34 Bharami akati kungirozi yaJehovha: “Ndatadza,+ nokuti handina kuziva kuti ndimi manga mumire mumugwagwa kuti musangane neni. Zvino kana zvakaipa kwamuri, regai ndidzokere.” 35 Asi ngirozi yaJehovha yakati kuna Bharami: “Enda nevarume vacho;+ asi hapana zvimwe zvaungataura kunze kweshoko randichakuudza.”+ Zvino Bharami akaramba achienda nemachinda aBharaki. 36 Bharaki paakanzwa kuti Bharami akanga asvika, akabva abuda kuti anomuchingura paguta reMoabhi, riri pamhenderekedzo yomupata weAnoni, uri kumucheto kwenharaunda yacho.+ 37 Bharaki akabva ati kuna Bharami: “Chokwadi handina kukutumira shoko kuti ndikushevedze here? Wakaregererei kuuya kwandiri? Chokwadi handigoni kukukudza here?”+ 38 Bharami akati kuna Bharaki: “Tarira, ndauya kwauri zvino. Ndingakwanisa kutaura kana chinhu zvacho here?+ Shoko richaiswa mumuromo mangu naMwari ndiro randichataura.”+ 39 Naizvozvo Bharami akaenda naBharaki, vakasvika kuKiriyati-huzoti. 40 Bharaki akabayira mombe nemakwai+ uye akatumira zvimwe kuna Bharami nemachinda aaiva nawo. 41 Zvino mangwanani Bharaki akatora Bharami, akamukwidza paBhamoti-bhaari,+ kuti aone vanhu vacho vose ari ipapo.+